थाहा छ शिशुले गर्भमा रहँदा किन लात्तीले हान्छ ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
थाहा छ शिशुले गर्भमा रहँदा किन लात्तीले हान्छ ?
शिशु गर्भमा हुर्कदै जाँदा विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरु गर्छन् । जसमा शिशुले लात्तीले बारम्बार हिर्काएको अनुभव प्रायः सबै आमाहरुले गरेका हुन्छन् । यदि गर्भवती महिलाको पेटमा हात राख्ने हो भने वा हेर्ने हो भने पनि गर्भवती बाहेकका व्यक्तिले पनि यो कुरा थाहा पाउँछन् । बच्चाले लात्तीले हानेको अनुभव गर्भवतीका साथै सम्पूर्ण परिवारको लागि विशेष हुन्छ ।
जब महिला गर्भवती हुन्छिन्, उनमा विभिन्न प्रकारको परिवर्तनहरु आउँछ । समय बित्दै जाँदा त्यस्ता परिवर्तनहरु झन् बढी देखिन थाल्छ । महिलामा देखिएका ती परिवर्तनहरुसँगै उनको पेटमा रहेको शिशुमा पनि विस्तारै परिवर्तनहरु हुन थाल्छ । शिशुले पेटमा लात हान्नु पनि बच्चामा भएको परिवर्तनको उदाहरण हो ।
लात्तीले हिर्काएको अनुभव लिएर सबैले आनन्दको अनुभव त गर्छन्, तर किन शिशुले गर्भमा रहँदा लात्तीले हान्छन् भन्ने सायद कम व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन सक्छ । यदि तपाइर्ंलाई पनि गर्भमा रहेको शिशुले किन लात्तीले हान्छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन भने आज हामी जानकारी गराउने छौं ।